Dingana tsikelikely hananganana ERP sy CRM ho an'ny SME | Avy amin'ny Linux
Tsikelikely hananganana ERP sy CRM ho an'ny SME anao
Ao amin'ny lahatsoratr'i Hevitra hampiasa rindrambaiko maimaim-poana ao amin'ny SME-nao naneho hevitra momba ny marobe izahay fomba ahafahan'ny rindrambaiko maimaimpoana manampy amin'ny fanatsarana ny famokarana ny orinasanao, saingy nasongadinay ihany koa fa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana, SME dia afaka mitahiry vola be amin'ny alàlan'ny fananana vahaolana manana toetra mampiavaka azy mitovy amin'ny rindrambaiko sandaina an'arivony dolara. Miorina amin'ny zavatra nohazavaina tao amin'ity lahatsoratra ity, te hanampy anao izahay hanome fiainana ny fizotr'ity fampiharana maimaim-poana ao amin'ny SMEs anao, ka amin'ity lahatsoratra voalohany an'ny maro ity dia hizara dingana iray hatrany izahay manangana ERP sy CRM.
Ny ERP sy CRM nofidianay dia Odoo izay horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ODOO: Ny OpenSource ERP izay manome zavatra horesahina! ary izany dia nisaina tao amin'ny lahatsoratray tamin'ny Ahoana ny fitazonana ny mpanjifa amin'ny rindrambaiko maimaimpoana y Ahoana ny fampitomboana ny orinasantsika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Ho an'ity tranga azo ampiharina ity dia hapetraka Odoo ao amin'ny kinova V8 miaraka amin'ny fanampian'ny OVA an'ny TurnKey Linux, izany hoe hampiasa milina virtoaly miorina amin'ny Debian isika izay hanana rindrambaiko ilaina hamboarina mialoha sy hapetraka mialoha mba hahafahan'ny Odoo mandeha tsara.
1 Fepetra takiana hananganana ERP sy CRM ho an'ny SME anao
2 Ahoana ny fametrahana Odoo amin'ny fampiasana TurkeyLinux OVA?
2.1 Odoo parameterizing voalohany
2.2 Fikirana fametrahana Odoo
Fepetra takiana hananganana ERP sy CRM ho an'ny SME anao
Azontsika atao ny manangana ERP sy CRM toa an'i Odoo amin'ny milina misy loharano vitsivitsy raha mbola tsy be loatra ny habetsaky ny fampiasana ilay fitaovana, ho an'ny ankamaroan'ny SME kely dia ampy ny ananantsika ekipa manana mihoatra ny 1 GB an'ny ram maimaim-poana, habaka kapila 20 GB ary fifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Tsy maintsy napetraka isika VirtualBox amin'ity solosaina ity ary manana alalana mifanaraka aminy handefasana ny firewall sy hanokatra na hanakatona seranana. Amin'ny tranga tsara indrindra dia azontsika atao ny mameno ny solo-saintsika miaraka amina kapila backup ary endri-javatra maro hafa hanatsarana ny fahombiazan'ny ERP sy CRM hapetraka.
Ahoana ny fametrahana Odoo amin'ny fampiasana TurkeyLinux OVA?
Sintomy ny Odoo Ova novolavolain'i TurkeyLinux avy amin'ny Eto.
Ampidiro avy amin'ny VirtualBox ilay ova alaina teo aloha, raha mankany ity File >> Manafatra serivisy virtoaly, safidio ny Ova, kitiho ny Manaraka, zahao na ovao ny safidin'ny milina virtoaly (ram, cpu, anarana sns) ary kitiho ny to import.
Amboary ny tambajotran'ilay milina virtoaly ananantsika hahafahany miditra amin'ny internet ary azo idirana amin'ny milina fampiantranoana, noho izany dia tsy maintsy tsindrio tsara ny masinina virtoaly izay nohafaintsika >> safidio voafantina >> Tambajotra >> Adapter 1 >> Alefaso adaptatera Network >> Mifandray amin'ny Bridge adaptatera >> ary mifidy ny adaptatera izahay >> Avy eo manaiky. Amin'ny tranga sasany dia tsy maintsy ampiasaintsika koa Adaptor 2 >> Safidio Adable Network adapter >> Mifandray amin'ny NAT.
Izahay dia mihodina ny milina virtoaly ary manomboka ny fizotran'ny parameterization voalohany amin'ny fampiharana Odoo anay.
Odoo parameterizing voalohany
Rehefa voalohany no mihodina ny milina virtoaly dia manomboka rafitra fiasa miaraka amin'i Debian izy io izay tsy maintsy ampidirintsika ny fikajiana ny teny miafin'ny root ary angatahana ihany koa izahay hametaka ireo serivisy ilaina amin'ny fifehezana sy ny fiasan'ny Odoo. Ny dingana amin'ny antsipiriany amin'ity fizotran'ny fametrahana parameter Odoo voalohany ity dia:
Midira ary jereo ny tenimiafin'ny Debian Root.
Ampidiro ary zahao ny tenimiafina postgresql izay hiasa toy ny database Odoo.
Ampidiro ary zahao ny teny miafina momba ny Password Password fitantanana data database Odoo, izay ampiasain'ny asan'ny Odoo Database.
Raha te hampiasa serivisy TurnkeyLinux ianao dia ampidiro ny API Key anao na tsindrio ny Skip.
Ampidiro mailaka ho fampandrenesana ny rafitra.
Mametraka ny fanavaozana ny fiarovana ilaina izahay.
Raha toa ka avo lenta ny fanavaozana ny fiarovana (toy ny fanavaozana ny kernel) dia hangataka anao hamerina hanamboatra ny fanavaozana izy, averinay indray izany ary miandry ny masinina hanomboka indray.
Raha vantany vao manomboka ny milina virtoaly, dia natomboka sy namboarina daholo ny serivisy mba hiasa tsara ny Odoo, haseho ny efijery iray miaraka amin'ireo serivisy sy ny IP hiditra amin'izy ireo. Manolo-kevitra manokana aho ny amin'ny tokony hamerenantsika ny IP izay omen'ny masinina virtoaly antsika amin'ny dhcp ho an'ny IP raikitra ao amin'ny tamba-jotra, satria mankany isika Advanced Menu >> Networking >> eth0 >> StaticIp ary ampidiro ny angona mifandraika amin'izany.
Fikirana fametrahana Odoo
Aorian'ny fampiharana tsara ny serivisy ilaina mba hiasa tsara ny Odoo, dia miroso amin'ny dingam-pandaminana ny fampiharana Odoo isika, miaraka amin'ny fananganana ny tahiry, ny fikajiana ny Odoo miaraka amin'ny fampahalalana momba ny SME anay sy ireo dingana rehetra mifandraika amin'izany. . Mba hanatanterahana an'io fomba io dia araho amin'ny antsipiriany ireto dingana manaraka ireto:
Avy amin'ny solosaina fampiantranoana (na avy amin'ny solosaina misy fidirana tambajotra) ampidiro ny Odoo IP izay naseho tamin'ny dingana voalohany, amin'ny tranga misy anay https://192.168.1.45 hisokatra tranonkala iray toy izao manaraka izao:
Mamorona tahiry ho an'ny fampiharana antsika, misafidiana teny miafina fidirana sy ny anaran'ny tahiry, azontsika atao ihany koa ny misafidy fa ny fampiharana antsika dia miaraka amin'ny angona fitsapana (ho an'ireo tranga izay tadiavinay hizahana ilay fitaovana). Mba hamita ity dingana ity dia omentsika Mamorona Database
Raha atao default dia 'admin' ny tenimiafin'ny mpandrindra
Amin'ny dingana teo aloha dia efa napetraka ny Odoo ary mifandray amin'ny Database iray, dia haseho antsika ny pejy toa ity manaraka ity izay ahafahantsika mametraka Modules hampanan-karena ny fampiharana Odoo, misafidy iray fotsiny ary tsindrio ny install.
Aza adino fa ankoatry ny Odoo, ny Turnkey Linux Ova dia manome antsika fidirana amin'ny Web Shell hitantanana ny distro avy amin'ny console, ny tontonana Webmin malaza, Adminer ho mpitantana angon-drakitra postgresql ary fidirana SSH sy SFTP. Ireo mpampiasa default hiditra amin'ireo rindranasa ireo dia ireto manaraka ireto: ny teny miafina no nampidirinao tao amin'ny masontsivana
Webmin, SSH: mpampiasa faka
PostgreSQL, Administrer: mpampiasa postgres
Kaonty Master Odoo: Admin
Ity fomba tsotra sy haingana ity dia hiteraka fampiharana Odoo v8 amin'ny Debian distro, havaozina sy hamboarina mba hiasa amin'ny fomba tsara indrindra. Amin'ny ho avy dia hanao tutorial izay hahafahantsika mametraka ny ERP Odoo ao anaty feo ary hianarantsika ny fomba handrindrana azy hampifanaraka azy amin'ny SME antsika.
Azafady mba lazao anay izay hevitrao momba an'ity karazana atiny ity sy izay tianao horesahinay amin'ny lesona manaraka. Misaotra betsaka dia tohizanay !!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Tsikelikely hananganana ERP sy CRM ho an'ny SME anao
deibis contreras dia hoy izy:
Salama, salama tolakandro, manao ahoana ianao?
Tena tiako ny pejy malalanao.
Vaovao amin'ny rindrambaiko maimaimpoana aho ary tiako ho fantatra raha afaka mampakatra lahatsoratra momba ny fomba fananganana tranokala maimaim-poana misy domain sy SEO ianao hampitomboana ny isa ao amin'ny google, tsy haiko raha azo atao izany.
Fiarahabana sy fisaorana maro
ATT: deibis Contreras
Valiny amin'ny contribre deibis
fanohanana tena tsara, mahaliana tokoa ny mahita ny tohin'ity lohahevitra ity, mandrindra azy ary mahita ohatra vitsivitsy efa natomboka, misaotra ny vaovao
Tomeu dia hoy izy:
Salama, fampahalalana tena tsara.
Nanontany tena aho raha maimaim-poana ity rindrambaiko ity, ary raha maimaim-poana ireo modules azo ampandehanana ary afaka mamorona ny ERC.
Ho an'ny fampianarana ho avy, manontany tena aho raha azo ampiharina amin'ny fidirana an-tserasera, izany hoe fampiasana azo ampiharina avy amin'ny birao samihafa mampifandray lavitra amin'ny fampiasana ny tranokala, ny vidin'ny fampiharana, ny vidin'ny modely, ny karazana orinasa azo ampifanarahana amin'izy io, ny filaminan'ny fampiharana ampiasaina .
Misaotra betsaka amin'ny asanao ary hotahin'Andriamanitra ianao.
Mamaly an'i Tomeu
Maimaimpoana ny Erp ary loharano malalaka, misy ny modely maimaimpoana sy maimaim-poana nefa misy ihany koa ny modules propriétaire, misy koa ny forum miaraka amin'ny antontan-taratasy sy consultants izay manoro hevitra anao (ny sarany indrindra amin'ny sarany) ... Hiezaka izahay handinika lalina kokoa ireo zavatra azontsika atao Miaraka amin'ny erp, amin'ny zavatra niainako manokana dia mino aho fa ity ERP ity dia azo ampifanarahana amin'ny karazana orinasa raha mbola ampiharina ny modules ilaina dia ny tiako holazaina amin'izany dia ny SME kely dia mila maodely vitsivitsy ary ohatra ny indostrian'ny metallurgical. bebe kokoa.
Misaotra betsaka amin'ny fotoananao sy ny fanoloran-tenanao.
Hotahian'andriamanitra anie ianao.
elmerfoo dia hoy izy:
Fanehoan-kevitra: Efa ela aho no nitady ERP + CRM tao amin'ny biraoko. fa mieritreritra aho fa ny PC-ko dia tena ambany be ho an'ny virtualization (P4 2,8 tokana core ram 3gb) dia tokony hahita torolàlana momba ny fametrahana azy aho. Salama.
Mamaly an'i elmerfoo
Ry malalako, azonao atao ihany koa ny misintona sary ISO amin'ity rohy ity https://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-odoo-14.1-jessie-amd64.iso ary apetaho toy ny distro Linux ... Tsy hanana olana ianao, raha tsy izany dia tsy virtoaly fa apetraka amin'ny fomba nentim-paharazana. Mitovy ny dingana raha tsy hoe amin'ny tapany voalohany dia hanontany anao izy ny fisarahana izay tianao hametrahana azy .. Izay fanontaniana dia ampahafantaro ahy
Gregory ros dia hoy izy:
Azoko atao ny mamaly anao, izaho / mpampiasa Odoo izahay, manana solosaina maromaro izahay. Odoo dia miainga avy any Chrome, Firefox, na amin'ny navigateur hafa, noho izany misy milina afaka miditra amin'ny tranokala afaka manao izany. Tsy miankina amin'ny rafitra miasa izy io. Ny zavatra mahazatra dia ny fametrahana azy amin'ny mpizara tranonkala, izay amin'ny orinasa kely dia azo ampiharina kokoa sy ara-toekarena ny manakarama azy.
Avelao aho hanao izay hahitanao zavatra mety hanakana ny valiny farany. Ara-dalàna, farafaharatsiny raha ny momba antsika, ny farany dia manokatra takelaka zillions ianao, miaraka amina efijery Odoo (Didiana, mpanjifa, naoty fanaterana, sns.). Tadidio fa amin'ity tranga ity dia fahatsiarovana tsy ampy ny mpitety tranonkala RAM. Heveriko fa mahaliana ny manitatra ny fitadidiana, raha ny zava-misy dia manana milina avy amin'ny ram 2GB isika, saingy angatahanay ireo solosaina vaovao misy 8 na 16GB, ankasitrahana izany.
Valiny tamin'i Gregorio Ros
Erie dia hoy izy:
Salama Gregorio, azonao atao koa ny manararaotra ireo fiasa vaovao amin'ny firefox.
Valiny tamin'i Erie
Tsy misy ny zava-drehetra maimaim-poana satria tsy maintsy mihinana zavatra izy ireo, amin'ny tranga toa an'i Google, mpamorona horonantsary ho an'ny YouTube, sns. azon'izy ireo atao ny mampiakatra ny faktiora amin'ny doka ary afaka ny mpampiasa. Saingy amin'ny rindranasa fandraharahana ny zavatra lôjika dia ny fandoavana haingana na ho haingana (modules, functionalities, customization, fametrahana, consulting, ...).
Heveriko fa tena tsara i Odoo saingy sarotra ho an'ny SME kely izay tsy mila be loatra, raha izany dia mety ho tsara kokoa ny mametraka azy: invoicescripts.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy dinihinao tsara izay atolotry ny rindranasa tsirairay maimaimpoana, ny vidin'ireo modely ilaina mba hiasa tsara ao amin'ny orinasanao sy ny vidin'ny fampiharana (fametrahana sy fikajiana eo amin'ny lafiny iray ary iray hafa tena manandanja: fiofanana).
Alfonso Pérez dia hoy izy:
Tena nohazavaina tsara.
Ny howto ho an'ny dolibarr dia mety ihany koa.
Valiny tamin'i Alfonso Pérez
Lahatsoratra iray tena mahaliana. Amin'ny tranga manokana misy ahy dia misy zavatra lehibe sisa, fantatro fa isaky ny manandrana manamboatra mpizara aho dia esoriko izy ary averin'ny toe-javatra aho, na dia miaiky aza aho fa araka ny filazanao azy dia toa mora izany.
Eo am-piasana no nametrahantsika azy, haharitra telo taona miaraka aminy, ary faly sy gaga amin'ny heriny sy ny fahaizany mampifanaraka izahay. Tsy ilaina intsony ny milaza fa mamporisika azy tsy hisalasala izahay. Ny orinasanay dia mamboly ary mitondra ny ampahany amin'ny famokarana, ny fanodinana ary ny marketing, ao koa ny fivarotana, ny baiko an-tserasera, sns. Aleo tsy ferana fotsiny ny tenantsika amin'ny tpv tsy misy intsony. Manana PC misy Windows sy Linux izahay. Mba hanasongadinana fa hitako fa lojika ny manantona manam-pahaizana momba ilay lohahevitra hametraka, manamboatra sy mitazona ny rafitra, ny fametrahana, araka ny filazanao azy, dia toa mora, fa ho an'ny ankamaroan'ny (farafaharatsiny ho antsika) izay rehetra mandeha bebe kokoa dia tsara Beyond famerenana sy fametrahana ny OS. Ho an'ny magazay kely na orinasa iray, ny fametrahana tsotra dia mety ho ampy kokoa, fa rehefa miditra amin'ny dingana somary sarotra kokoa ianao dia hita fa misy modely an'arivony, mahita fotsiny izay ataon'ny tsirairay ary iza no mety indrindra. manjavozavo ho an'ny mpampiasa. neophile. Mariho ihany koa fa na izany na tsy izany, raha misy orinasa manana teknisianina informatika manokana na manakarama azy ireo, Odoo dia tahiry "Tena Manan-danja" ho an'ny rehetra, tsy mandoa vola anao ilay programa, tsy misy fahazoan-dàlana, raha tsy miasa ianao teknisiana solosaina (raharahanay) tsy mila manakarama olona hitehirizana azy ho anao ianao (maimaim-poana izany fa tsy altruistika), ahafahanao mampifanaraka izany amin'ny filàna, ny fanitarana sns sns. Aza avela hisy hanao fahadisoana amin'ny fieritreretana fa satria afaka izany dia ho voafetra kokoa noho ny vahaolana ara-barotra hafa.
Mario J. Castaño H. dia hoy izy:
Salama hariva ary arahaba avy any Bogotá mangatsiaka.
Misaotra betsaka anao aho noho ity lesona ity, izay heveriko fa tena zava-dehibe sy takatry ny saina ho an'ny olona laika toa ahy.
Manantena ny faharoa aho ary maninona no tsy misy lesona hafa momba ity lohahevitra ity.
Rehefa avy namaky ilay zavatra aho, dia nanana fisalasalana, ahiahy ary banga maro be aho. Manantena aho fa afaka manafoana azy ireo indray mandeha rehefa mivoaka ny ampahany manaraka.
Valiny tamin'i Mario J. Castaño H.
VPAN dia hoy izy:
Feno fankasitrahana aho raha afaka manome rohy na tutorial momba ahy amin'ny fomba fanamboarana sy fampiasana Odoo ianao
fandraisana anjara tena tsara
Valio ny VPAN
CP dia hoy izy:
Ry Lagarto malala, fandraisana anjara tsara tokoa !!!!, roa taona lasa izay dia nametraka ny Odoo 8 tao amin'ny orinasako (farmasia) aho ary tamin'ny ezaka be dia be azoko natao mba ahafahako manamboatra azy io mba hiasa, rindrambaiko azo ovaina be izy io ary tsy izany. sarotra amboarina.
Androany maraina dia nampidina ny iso aho ary nametraka izany tamin'ny PC taloha araka ny torolalana voazava eto, nety tsara ny zava-drehetra. Amin'ity rafitra fiasa ity miaraka amin'ny Odoo efa napetraka mialoha dia ho mora kokoa ny hamerina ny tahiry.
Fanontaniana iray monja: azonao atao ve ny mametraka birao toy ny xfce, gnome, sns? sa ny hevitra dia hoe mpizara fotsiny no asany?
Valiny amin'ny CP
Azonao atao ny mametaka tontolon'ny birao, fa kosa asaina avela tsy misy tontolon'ny birao sy manao fidirana lavitra ianao, amin'izay no handanianao loharano vitsy kokoa ary hanana fametrahana madio kokoa.
Miezaka mamorona database vaovao aho ary mahazo izao hafatra manaraka izao:
Eroo Server Error
Traceback (antso farany farany):
File "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", tsipika 539, amin'ny _handle_exception
miverina Super (JsonRequest, tena) ._ handle_exception (exception)
Ampidiro ny rakitra "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", tsipika 576, amin'ny fandefasana
valiny = self._call_unction (** self.params)
File "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", tsipika 313, ao amin'ny _call_unction
miverina self.endpoint (* args, ** kwargs)
File "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", tsipika 805, ao amin'ny __call__
miverina irery.method (* args, ** kw)
Ampidiro ny rakitra "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", tsipika 405, ho valiny_wrap
valiny = f (* args, ** kw)
File "/opt/openerp/odoo/addons/web/controllers/main.py", andalana 703, amin'ny famoronana
File "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", tsipika 881, ao amin'ny proxy_method
valiny = dispatch_rpc (self.service_name, fomba, args)
File "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", andalana 115, ao amin'ny dispatch_rpc
valiny = fandefasana (fomba, parama)
Ampidiro ny rakitra "/opt/openerp/odoo/openerp/service/db.py", andalana 65, amin'ny fandefasana
File "/opt/openerp/odoo/openerp/service/security.py", andalana 32, ao amin'ny check_super
fananganana openerp.exceptions.AccessDenied ()
AccessDenied: nolavina ny fidirana.
Misy hevitra ve ???
Haha, ny hadisoako, tamin'ny fahazarana dia nanoratra "admin" ho tenimiafin'ny tompoko aho, avy eo tonga tao an-tsaiko ny fametrahana ny teny miafiko izay nomeko ho an'ny Odoo ao amin'ny fametrahana ny rafitra ary nandeha tsara daholo ny zava-drehetra. Na izany na tsy izany misaotra betsaka.
Tsara! Torolàlana tena tsara, misaotra betsaka anao nandany fotoana. Manana olana aho: rehefa vita ny fametrahana dia mijanona ao amin'ny terminal izy ary tsy mampiakatra ny tontolon'ny sary. Niezaka ny nametraka xorg aho, saingy tsy manomboka azy koa. Ahoana no tokony hidirako?
Miala tsiny amin'ny tsy fahalalana.
Ahoana ny fomba hananganana mpizara Ushahidi handraisana an-tsoratra sy hanaraha-maso ireo heloka bevava nataon'ny governemanta Venezoeliana
Linux Mint 18.2 "Sonya" fanontana beta azo alaina miaraka amin'ny default default ny KDE 5.8